सबैको सुझाव र प्रेरणाका साथ एकदिन सफल हुनेछु ; नव मोडल समिर खान – Ramro Sandesh सबैको सुझाव र प्रेरणाका साथ एकदिन सफल हुनेछु ; नव मोडल समिर खान – Ramro Sandesh
सबैको सुझाव र प्रेरणाका साथ एकदिन सफल हुनेछु ; नव मोडल समिर खान
काभ्रेपलाञ्चोक, मोफसल शहर राजविराजमा जन्मिएर पनी काठमाण्डौंलाई कर्मभुमी बनाउदैं नेपाली म्युजिक भिडियोहरुमा मोडलको भुमीकामा निकै ब्यस्त बनेका छन समिर खान । मानिस एक काम अनेक भने जस्तै विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर सफलताको शिखर चढ्दै गरेका व्यक्ति हुन । उनी सानै उमेर देखी कलाकारिता प्रतिको मोह र प्रतिभा भएका कारण उनी आफनो रुची पुरा गर्नको लागी कलाकारितामा हानिएको उनी बताउछन । ब्यावसायी भएपनी आफनो मेहनत गरे अनुसार कलाकारिता क्षेत्रमा ब्यापक सफलता पाइरहेको बताउदै उनले भने ‘गर्दै जाँदा एक दिन अवश्य पनि सफलता मिल्छ त्यसैले मैले कलाकारितालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ,सबैको सुझाव र प्रेरणाका साथ एकदिन सफल हुने विश्वास लिएको ’ उनी बताउछन ।
अहिले उनी कलाकारिताको लागी निकै लागिपरेका छन् । छोटो समयमै उनलाई सफलता पनि मिलेको छ । दर्जनौ नेपाली सुगम संगीतका गीतहरुमा समिर लाई देख्न सकिन्छ । आफनो बाल्यकालको सपना पुरा गर्नको लागी साथै नेपाली मौलिक गीत संगीतलाई आफुले केही योगदान पु¥याउने उदेश्यले लागेका समिर खानसँग नव क्षितिज साप्ताहिको लागी अरविन्द्र गौतमले गरेको बिशेष कुराकानी
लकडाउन प्रारम्भ भएदेखि नै मेरो जन्म घर मा छु । प्रारम्भका केही दिन त असाध्यै उकुसमुकुस जस्तो भएको थियो । तर, लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि राजविराज को बसाइ रमाइलो नै भैरहेको छ । कलाकार भएकोले घरको बसाईलाई पनि मैले नयाँ कर्ममै सक्रिय बनाइरहेको छु ।
नेपाली मोडलिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन तथा यस क्षेत्रामा लाग्ने युवा युवातीहरुलाई हौसला प्रदान गर्दै आगामी दिनमा नेपाली कलाकारिताको क्षेत्र साथै मोडलिङलाई अगाडि बढाएर अगाडि बढेको खण्डमा नेपाली कलाकार ले पनी फरक किसिमको फड्को माप्थीयो की ?
सकारात्मक सोच र कलाकारिता प्रतिको मोहलाई जिवन्तता दिदै नेपाली मौलिक पनको आभाष दिने किसिमको कलाकारहरुले आफनो सिर्जना प्रस्तुत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । दिगो र दिर्धकालिन सोचको साथ कलाकारितामा आएको खण्डमा कलाकारतालाई स्वच्छ र परिकृत ढंगबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
तपाई कलाकारिता क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
बाल्यकाल देखी नै कलारिता प्रति मोह भएकाले काठमाण्डौ बसाईमा आफनो जिवनको केही सपना पुरा गरौ भन्ने सोचका साथ कलाकारितामा लागे । नहेर मलाई त्यसरी गीतबाट मैले कालाकारिताको क्षेत्रमा केही गरौ भन्ने चाहनाको साथ अगाडि आएको हुँ ।
तपाईले अभिनयमा गरेका सर्वाधिक दर्शकको मनमा बस्न सफल गीत कुन कुन हुन ?
नहेर मलाई त्यसरी , मायाको बजार प्यारमा टेन्सन ,दुनियाँ लगायतका गीत मेरो अभिनयलाई आम भगवान रुपी दर्शक तथा स्रोताले अधिक मन पराई दिनुभयो जस्को कारणबाट मैले अवार्ड पनी जित्न सफल भए ।
तपाई ले प्राप्त गरेका अवार्डहरु कुन –कुन हुन ?
क्यिटिभ इन्साइडर मिडिया तथा शुभ कामना मिडिया सोलुसनले आयोजना गरेको नेपाली आर्ट एण्ड कल्चर म्युजिक अवार्डमा नहेर मलाई त्यसरी गीतबाट सर्वोकृष्ट म्युजिक भिडियो पुरुष मोडलको अवार्ड पाए भने नेशनल इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डमा पनी प्रमोद खरेलको आवाज रहेको दुनियाँ गीत बाट पपुलर आधुनिक मोडल पुरुष को उपाधी हासिँल गर्न सफल भए । जसको कारणबाट नेपाली संगीत र कलाकारिताको लागी केही थप हौसला एवम् प्रेरणा मिलेको छ ।
मोडलिङ्ग ,गीत गाउँदा र साथी भाई हरु सगँ नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न घाम गर्न पाउँदा असाध्यै खुशी लाग्छ ।
आगामी समयमा तपाईको कलाकारिता प्रति योजना के रहेको छ
आगामी समयमा रजतपटको क्षेत्रमा आफनो कलालाई प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको छु । जसको लागी मैले बर्तमान समयमा विभिन्न तयारीहरु गरिरहेको छु । साथै नेपाली सुगम गीतका भिडियोका साथै पप आधुनिक गीतमा पनी आफनो अभिनय कलाको माध्यमबाट थप प्रभावकारी काम गर्ने र फरक धारबाट अगाडि बढने योजना रहेको छ । म्युजिक भिडियोको अलबा उनी अव छिटटै विभिन्न सटमुभी र टेलिश्रृङख्लामा समेतमा आउने छु ।
पहिलो पटक अभिनय गर्दा मैले १० पटक सम्म टेक खाएको तर आफुलाई क्यामेरा फेस गर्नको लागी शुरुको चरणमा निकै अफटयारो लागेको थियो । जुन गीतमा अभिनय गर्दा आफैमा चुनौती महसुस गरेको थिए ।
नेपाली कलाकारितमा गरिरहेको छु । हजुरहरुकै मायाले म टिकेको छु र साथ सपोर्ट, सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला । मेरो अभियनमा रहेका गीत संगीतलहरुलाई माया गरिदिनु होला यही भन्न चाहन्छु ।